मनोज गजुरेलसँग विवाहको हल्ला चलाइएपछि वर्षा लेख्छिन् : कलाकार भन्दैमा जे पनि लेख्न र भन्न छुट छ र ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाज/मनोज गजुरेलसँग विवाहको हल्ला चलाइएपछि वर्षा लेख्छिन् : कलाकार भन्दैमा जे पनि लेख्न र भन्न छुट छ र ?
आदरणिय सर, मनोज गजुरेलको र मेरो बाटो अलग अलग छ । मेरो उहाँप्रति सम्मान सधै उचो नै रहेको छ । हामीलाई जोडेर कुप्रचार गर्दा कसको पो फाइदा होला र ? कलाकार भन्दैमा जे पनि लेख्न र भन्न पाइन्छ भन्ने ‘मानसिक विक्षिप्तता’ बेलैमा हटाएको राम्रो ?? ,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,